Oke Osimiri Caspian: njirimara, nhazi, ụdị ndu na ihe egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke Osimiri Caspian
Taa, anyị ga-ekwu maka oke osimiri nke nwetara aha a mana nke bụ ọdọ mmiri nwere mmiri iyi mara mma. Ọ gbasara Oke Osimiri Caspian. Oké Osimiri Caspian bụ mmiri nke ala gbara gburugburu kpamkpam na enweghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi gaa n'oké osimiri ma ọ bụ n'oké osimiri. Yabụ, ọ bụrụ na anyị agbaso nkọwa e nyere na geology, ọ bụ akụkụ na ọ bụghị oke osimiri. O nwere otu nnu nke nnu nnu ma tinye ya dika oke mmiri kachasi n'ime uwa. N'otu oge ahụ, a na-ahụta ya oke osimiri pere mpe n'ụwa.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara, geology na ọchịchọ ịmata nke Osimiri Caspian.
2 Nhazi nke Oke Osimiri Caspian
3 Ihe ndi di iche iche na egwu nke Caspian Sea
Mgbe ị na-atụle Oké Osimiri Caspian ma ọ bụ ọdọ, mmadụ ga-elekwa anya n'ihe iwu kwadoro. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mba ndị na-amachi ya ga-atụle oke osimiri, na akụ ndị sitere n'okike ga-abụ akụ nke ụsọ osimiri nke mba ọ bụla. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ọdọ mmiri, a ga-ekewa ihe ndị dị ala n'etiti mba ndị na-emepe emepe nha anya.
Oké Osimiri Caspian dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Ugwu Caucasus na nnukwu ịda mbà n'obi n'etiti Europe na Eshia. Anyị dị ihe dị ka 28 mita n'okpuru oke osimiri. Mba gbara okirikiri ndị gbara Oké Osimiri Caspian gburugburu bụ Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Russia na Kazakhstan. Oke osimiri a nwere efere atọ: etiti ma ọ bụ etiti etiti na mpaghara ndịda.
Osimiri nke mbụ dịkarịsịrị nta ebe ọ bụ na ọ kpara ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ngụkọta nke oke osimiri ahụ. Ọ bụkwa akụkụ kachasị emighị emi anyị nwere ike ịchọta n'akụkụ a. Ebe etiti a nwere omimi banyere gburugburu 190 mita, nke na-enye ohere ịdị adị nke akụnụba ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nke kachasị omimi dị na ndịda. Ebe ndịda ndịda na-ejide 2/3 nke mkpokọta mmiri na Oké Osimiri Caspian.
Oke obosara nke oke osimiri a bu ihe dika 230 kilomita. N'ebe kachasị dị na mbara igwe ọ nwere ike ịlele kilomita 435 na ogologo kachasị ogologo bụ ihe dịka kilomita 1030. Akụkụ miri emi karị bụ mpaghara ebe ala ahụ dara na omimi 1.025 mita. Ezigbo akụkụ nke oke osimiri bụ 371000 square kilomita na mmiri nke 78.200 cubic kilomita. Enwere ike ịsị na oke osimiri a nwere ihe karịrị 40% nke mmiri mpaghara ụwa niile. Ọ bụ ezie na ọ nweghị npụpụta sitere n'oké osimiri, ọ dịghị oke osimiri na-eriju mmiri site n'ọtụtụ osimiri na-asọba n'ime ya.
N'etiti osimiri kachasị mkpa nke na-asọba n'oké osimiri a, anyị kọwapụtara Ural, Térek, Atrak na Kurá. Nke a bụ otu n’ime ihe mere eji mara ya ka oke osimiri ebe ọ bụ na ọtụtụ osimiri na-asọba n’ime ya.
Nhazi nke Oke Osimiri Caspian
Mmiri nke oké osimiri a dị ntakịrị nnu, ọ bụ ezie na ọ bụ nanị ihe dịka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke nnu nnu nnu mmiri dị n’osimiri. Nke a bụ n'ihi na pasent nke mmiri na-amịkọrọ ebe ọ bụ na ọ bụ nnọọ elu n'ebe ụfọdụ.
Mgbe ihe ojoo a na-akpọ Paratetis kpụrụ ihe dịka nde 5.5 afọ gara aga, ọ kwụsịrị njikọ ya na oke osimiri ma bụrụ nke dịpụrụ adịpụ mgbe mbelata mmiri na mbuli elu nke ụwa nke mebere ugwu ndị dị nso. Ugwu ndị a bụ Caucasus na Elburz. Na mbido okpukpo nke Caspian, o guzobere otu efere ya na Oké Osimiri Ojii ma rute oke ya n'oge oge Paleocene. Ọ bụ n'oge a ka a hụrụ nnukwu ugwu nke ugwu Caucasus nke mere ka nkewa nke basin ahụ nwee ahụ abụọ. Nke a mere ka Oké Osimiri Caspian kewapụ kpamkpam.
Ihe ndi di iche iche na egwu nke Caspian Sea
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, Oké Osimiri Caspian bụ akụkụ nke ọtụtụ ihe dị iche iche dị ndụ. N'ime ya enwere ụdị anụmanụ karịrị 850 na ihe karịrị ụdị ahịhịa 500 N'ihi ọnọdụ a pụrụ iche e guzobere, ekwupụtawo na ihe dị ka ụdị anụmanụ 400 dị iche iche bi na ọtụtụ ndị ọzọ na-ebikọ na ndagwurugwu nke osimiri na n'ụsọ mmiri.
Fọdụ ụdị anụmanụ ndị anyị nwere ike ịchọta n'Oké Osimiri Caspian bụ: akara ahụ, ịbụ otu n'ime ụmụ anụmanụ kachasị mara mma ebe ọ bụ na a hụghị ha ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa ebe ọ bụ ụdị ebumpụta ụwa. Anyi nwekwara otutu azu dika perch, pike, herring, castle whitefish, sprat, bream na sturgeon. Sturgeon bụ otu azụ na-enye mba ndị gbara ya gburugburu ego ebe ọ bụ na a na-enye roe caviar azụ ya. Azụ azụ azụ nke oké osimiri a na-anọchite anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke njide ụwa ya.
Ọ bụrụ na anyị agaa n’akụkụ mmiri dị n’okpuru ebe obibi anyị, anyị nwekwara ike ịchọpụta ịdị adị nke ụdị mollusks na crustaceans, yana ụfọdụ anụ na-akpụ akpụ. Anyị na-ahụ mbekwu ndị Russia, mbe ojii, tinyere ndị ọzọ. N’elu na n’oké osimiri, ụfọdụ nnụnụ na-akwụ akwụ ma na-akpọnwụ, dị ka gull Caspian, coot nkịtị, nnụnnụ nnụnnụ, ọgazị nkịtị, mallard, nnụnnụ mmiri na nnụnụ alaeze ukwu, n'etiti ndị ọzọ.
Banyere ahịhịa, anyị na-ahụ ụfọdụ ụdị algae na-acha uhie uhie na aja aja nke a hụrụ na omimi nke oke osimiri na n'akụkụ ụfọdụ n'ụsọ osimiri. Na mpaghara ikpere n'ụsọ ụfọdụ xerophytic osisi na-eto nke na-eto eto nke ọma. Fọdụ n'ime osisi ndị a na-emegharị ka ala kpọrọ nkụ.
Dị ka a tụrụ anya ya, ọrụ akụ na ụba nke ụmụ mmadụ na-eyi oke osimiri a egwu. Efere nke oké osimiri a dị n'ụba na mmanụ na gas. Ihe omuma ndi a bu ihe kachasi mkpa na mpaghara a dum. Nrigbu mmeputa a abawanyela n'ime afọ iri gara aga dabere na mkpa a. Ha na azu azu ha na - enye aka na uto aku na uba na - ebute nsogbu na gburugburu ebe obibi.
Nke a bụ n'ihi mmetọ nke mmiri ahụ n'ihi nrụpụta nke nyiwe ihe mmịpụta, agwaetiti ndị na-emepụta mmiri na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa iji nwee ike wepụta ihe ndị a sitere n'okike ma wepụ ihe ndị na-egbu egbu site na ọrụ ugbo na anụ ụlọ.
A na-enwekwa ụjọ mgbe niile site na nfufu mmanụ. Ebe ọ bụ na ọdịdị nke oké osimiri ahụ mechiri emechi, Oké Osimiri Caspian nwere nnukwu mmetọ.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oké Osimiri Caspian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Caspian
Ofdị na-agbawa agbawa